भुटानले १० रन बनाउँदा ६ विकेट गुमायो, नेपाल जित नजिक ! - Everest Dainik - News from Nepal
भुटानले १० रन बनाउँदा ६ विकेट गुमायो, नेपाल जित नजिक !
काठमाडौं । मलेसियामा जारी आइसिसी विश्व टी–२० क्रिकेटअन्तर्गत एसिया छनोट समूह ‘बी’ को चौथो खेलमा नेपालले दिएको १५१ रनमो विजयी लक्ष्य पछ्याउने क्रमममा भुटानले दश रनमै सात विकेट गुमाएकोे छ । भुटानको इनिङ तहसनहस बनाउन नेपालका सन्दिप र ललित घात भए । उनीहरु दुवैले समान ३ ३ विकेट लिन सफल भए ।
याे पनि पढ्नुस नेपालद्वारा भुटानलाई १५१ रनको लक्ष्य, प्रदिपले बनाए नटआउट ७५ रन
आज ललितनारायाण राजवंशीले पहिलो ओभरमै २ विकेट लिएका थिए । यस्तै, उनले छैठौं ओभरमा अर्को विकेट थप्दै आफ्नो खातामा तेस्रो विकेट लेखे । यस्तै सन्दिपलेपनि तिन विकेट लिएका छन् ।
उनले दोस्रो ओभरको दोस्रो र तेस्रो बलमा विकेट लिए । र तेस्रो विकेट ५.५ ओरमा लिए । यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले ४ विकेट गुमाउँदै १५० रन बनाएको थियो । आज नेपालका लागि प्रदीप ऐरीले अर्धसतकीय पारी खेले । ६८ बल खेलेका ऐरीले २ छक्का र ६ चौकासहित ७५ रनमा नटआउट रहे ।
याे पनि पढ्नुस महिला च्याम्पियनसिपः उद्घाटन खेलमा भुटानमाथि नेपाल ३–० ले विजयी
लाइभ स्कोर हेर्न यहाँको क्लिक गर्नुस्
अनिल शाहले २७ रन बनाउँदा दीपेन्द्र सिंह ऐरीले १५ तथा आरिफ शेखले १३ रन जोडे । करण केसीले ५ बलमा ११ रन जोडे । यसअघि नेपालले म्यान्मार, आयोजक मलेसिया र थाइल्याण्डलाई पराजित गरिसकेको छ ।